नेप्सेमा २ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, कुनकाे कतिमा खुल्छ कारोबार ? - Laganikhabar
नेप्सेमा २ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, कुनकाे कतिमा खुल्छ कारोबार ?
विहीबार, ०९ मंसिर २०७८, ०८ : १८ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडाैँ - नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज (मंसिर ९ गते, बिहीबार) विभिन्न २ वटा कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन भएकाे छ । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडकाे सेयरमूल्य समायोजन भएको हाे ।
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २० प्रतिशत बोनस सेयर पछि नेप्सेले प्रतिकित्ता एक हजार २ सय रूपैयाँ कायम हुने गरी सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य एक हजार ४ सय ४० रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो ।
त्यसैगरी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडकाे ८ प्रतिशत बोनस सेयर पछि नेप्सेले प्रतिकित्ता ३ सय ३१ रूपैयाँ ४८ पैसा कायम हुने गरी सेयरमूल्य समायोजन गरेको हाे । नेप्सेले बुधबारकाे अन्तिम कारोबार मूल्य ३ सय ५८ रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो ।